China ukuqeqeshwa kweqembu lebhola lebhola lezinyawo elishibhile Isitolo esidayisa yonke impahla ukuqeqeshwa kweqembu lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola RE-HUO
Isitolo esidayisa yonke impahla ezishibhile zebhola likanobhutshuzwayo ukuqeqeshwa kweqembu lebhola lebhola lebhola lebhola basketball ukuqeqeshwa kweVests Training
Idizayini yangokwezifiso: Akunalutho - ukuze ukwazi ukwenza ngezifiso.
Yenziwe ngo-100% i-polyester mesh enezingcezu ezimbili ezinwebeka okhalweni. Kulula ukugqoka futhi ususe.
Izinto: 105gsm 100% i-polyester
Umbala: Okubomvu / oku-Orenji / okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo / okukhanyayo okuluhlaza / Okuphuzi
Okwevesti lokuqeqeshwa kwesitoko, i-MOQ yethu izingcezu ezingama-50, futhi ungakhetha osayizi nemibala eminingi.
Leli yishadi losayizi esilithengayo, Sinikeza insizakalo yosayizi oyifisayo.
Langaphambilini Amahembe e-polyester asheshayo ashibhile wokukhangisa we-marathon kanye nesikibha sokhetho olwenziwe ngokwezifiso
Olandelayo: Abadala - Intsha I-Scrimmage Practice Jerseys Team Pinnies Sports Vest Soccer, Football, Basketball bibs